December 23, 2014 – democracy for burma
#လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံများအား #အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခြင်းအပေါ် #၈၈ #မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ) မှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်း
On December 23, 2014 December 23, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံများအား အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခြင်းအပေါ် ၈၈ မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ) မှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်း
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၃ ရက်
စာအမှတ် ။ ။ ၁၁/၂၀၁၄ (၈၈)
၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၂ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်း၌ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာနေ ဒေါ်ခင်ဝင်းသည် နေရာတွင်ပင် သေဆုံး သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ရွာသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် အကြောင်းများကို တုန်လှုပ်ဝမ်းနည်းစွာ ကြားသိခဲ့ရ ပါသည်။
၂။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှစ၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမီတက် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀မ်ဘောင်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းကာ ကြေးနီတူးဖော်ထုတ်ယူနေသည့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုမရှိသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသောစီမံကိန်းတစ်ခု၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဒေသခံများ၏ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင် မြေယာများလက်လွတ် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံ ပျက်ယွင်းနိမ့်ကျခြင်း၊ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုများကြောင့် ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ရွာသားအများအပြားမီးလောင်ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခံရခဲ့ခြင်းနှင့် ယခု တောင်သူ တစ်ဦး အသက်ဆုံးရှုံးရသည်အထိ ဆိုးရွားလွန်းလှသည့်ပြဿနာများစွာကို ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအနေဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏သဘောဆန္ဒနှင့် အကျိုးစီးပွားကို အထူး အလေးထားရမည်ဖြစ်သည်။တရားမျှတမှုမရှိသော၊ တာဝန်မဲ့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အများပြည်သူ ၏ ဆန့်ကျင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူများအကြား အမည်ပျက်နိုင်ငံဖြစ်သွားနိုင်သည်ဆိုသည်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ အစိုးရများအဖို့ လက်ပံတောင်းတောင် ပဋိပက္ခမှာ ဆင်ခြင် စရာသင်ခန်းစာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
၅။ အစိုးရတစ်ရပ်တွင် နိုင်ငံသားများ၏ အသက်အန္တရာယ်နှင့် ဘ၀လုံခြုံမှုကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် လွတ်လပ်စွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခွင့်ကို အာမခံရန် အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိသည်။ လူတစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အကျိုး စီးပွားကိုသာရှေ့ရှုပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် တိုင်းပြည်နှင့် ဒေသခံတိုင်း ရင်းသားပြည်သူများ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပေါ်ထွန်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ မတည်ငြိမ်မှုနှင့် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယခုဖြစ်ရပ်သည် လက်ပံတောင်းဒေသခံများ၏ မြေယာဆုံးရှုံး မှုများကိုသာမက အသက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်အထိ ဆိုးရွားလွန်းသော လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှု ဖြစ်သောကြောင့် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း
လက်ပံတောင်း တောင် တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တောင်သူ တဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး ရချင်း နှင့် ပြည်သူများ သေနတ်ဒဏ်ရာရချင်းကို ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံ့ ချပါသည်။ သို့သော် လက်ပံတောင်း တောင် ကိတ်စ အကြောင်းပြုပြီး မြန်မာ တွေကို တရုပ် နဲ့ ရန် တိုက်ပေးနေသည်ကို ဝမ်းနဲစွာ တွေ့ရသည်။ BDC အနေ ဖြင့် လက်ပတန်းတောင် ဝမ်ပေါင် ကိတ်စ တရုပ်နဲ့ မြန်မာများ တည်ပေး စရာ မလိုဘူး ဟု ထင် သည်။ အခုတည်ပေး ရန်တိုက်ပေး လုပ်နေသူတွေဟာ လူမျိုးရေး သွေးထိုး တာ နဲ့ တူနေတယ်ဟု ထင် သည် ။ အခု တရုပ် ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် တွယ်နေသူ အများစု ဟာ ၇၈၆ ကုလား ထိရင် မချိအောင် နာကျသူများ အများစု ဖြစ် ကြ ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တွေကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း စော်ကားကြသူများ အများစု ဖြစ်ကြသည် ကိုထူးဆန်းစွာ တွေ့ ရသည်။ မဘသ ကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အမြဲ ဆဲနေသူ အများစု ဟာ ဒီချုပ် နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တွေ ပူးပေါင်းမိမှာကို စိုးရိမ်ကြပြီး ဒီချုပ် ကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အမြဲဆဲနေသူ အများစု ဟာလဲ ဘုန်းတော်ကြီး တွေနဲ့ ဒီမိုတွေ ပူးပေါင်းမိမှာကိုစိုးရိမ် ကြသည်ဟု ထင်မြင်မိသည် ။ လက်ပံတောင်း တောင် လူသတ်မှု နဲ့ အကြမ်း ဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟာလက်ရှိ အစိုးရတွင် တာဝန် လုံးဝ ရှိသည်ဟုခံယူသည်။ ပြည်သူများ ဘေးကင်းကြပါစေ အေးချဏ်းကြပါစေ လှည့်စားခံရခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
[Burma Democratic Concern (BDC)]
ယနေ. ညနေ ရန်ကုန်မြို့တရုတ်သံရုံးရှေ့ လက်ပံတောင်းတောင်အကြမ်းဖက်မှု
ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြ ။Min Nay Htoo.Myat Thu Aung.
wanbao photocr.Min Nay Htoo
မိုးကြိုးပြင်ကျေးရွာမှ ဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံးမှု ဆားလင်းကြီးရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် ညနေ ၆း၁၀ နာရီ အချိန်က ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ယမန်နေ့က အဓိကရုဏ်း၌ သေဆုံးသွားရသော မိုးကြိုးပြင်ကျေးရွာမှ ဒေါ်ခင်ဝင်း သေမှုသေခင်းကို အမှုဖွင့် တိုင်ကြားနေစဉ်။ CR.Ant Bwe Kyaw
မုံရွာမြို့မှ လက်ပံတောင်းတောင်၊ ဆည်တည်းရွာသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ
လက်ပန်းတောင်းတောင်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အဓိကရုဏ်းများကြောင့် သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ရန် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက မုံရွာဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိနေကြသော ၈၈မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း )၊ မန္တလေးမြို့မှ ဆရာတော် ၁၅ ပါး၊ ဆရာဝန် ၂ ဦးတို့သည် ဆေးရုံပေါ်မှ ဒဏ်ရာရ လူနာများကို ကူညီအားပေးခဲ့ကြပြီး ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂း၅၀ နာရီတွင် မုံရွာမြို့မှ လက်ပံတောင်းတောင်၊ ဆည်တည်းရွာသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာတွင် ယမန်နေ့က ရရှိဒဏ်ရာမပြင်းထန်သဖြင့် သက်သာလာသော မိုးကြိုးပြင် အလယ်ရွာမှ ဦးသန်းမြင့်၊ ဒေါ်သန်းနွဲ၊ ကိုကျော်နိုင်ထွန်း၊ ကိုတိုးနိုင်ဝင်း၊ မဂျူး၊ မ၀င်းလှိုင် တို့ ၆ ဦးကို ၎င်းတို့၏ရွာသို့ ပြန်လည်ပို့ပေးရန် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။
ဓာတ်ပုံ – အောင်နေမျိုး
ဆရာတော်များနှင့် ၈၈မျိုးဆက်တို့ မုံရွာဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိ
လက်ပန်းတောင်းတောင်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အဓိကရုဏ်းများကြောင့် သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ရန် ၈၈မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း )၊ မန္တလေးမြို့မှ ဆရာတော် ၁၅ ပါး၊ ဆရာဝန် ၂ ဦးတို့သည် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီတွင် မုံရွာမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် နေ့လယ်စာစားအပြီး မုံရွာမြို့ခံ ၈၈မျိုးဆက် ( ငြိမ်း/ပွင့် ) အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ယမန်နေ့က အဓိကရုဏ်းတွင် ဒဏ်ရာရသဖြင့် မုံရွာဆေးရုံကြီးသို့ တင်ထားရသူများကို ယခု မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ နာရီတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။
(ဓာတ်ပုံ – အောင်နေမျိုး)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်း
တောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအနီး လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား
၈၈မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ ဘ၀အလင်း
ဆရာတော်နှင့်သံဃာတော်များ၊ ဆရာဝန်များနှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများက သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးကာ လိုအပ်သည်များကိုထောက်ပံ့ကူညီ
ဓာတ်ပုံ – အောင်နေမျိုး
လက်ပန်းတောင်းတောင် ဆည်တည်းရွာကို အသွား၊ တုံရွာတွင် ပိတ်ပင် တားဆီးခံနေရ
ယမန်နေ့ နှင့် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် တို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသော လက်ပန်းတောင်းတောင် ဒေသ အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ရန် ရန်ကုန်မြို့မှ သွားရောက်ကြသော ၈၈မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း )၊ မန္တလေးမြို့မှ လိုက်ပါလာသည့် ဆရာတော် ၁၅ ပါး၊ ဆရာဝန် ၂ ဦး နှင့် မုံရွာ ဒေသခံ ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်း/ ပွင့်) အဖွဲ့ တို့သည် တုံရွာ အနီးတွင် ရဲအင်အား ၂၀၀ ခန့်မှ ပိတ်ဆို့တားဆီးခံနေရသဖြင့် ယခု မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နာရီတွင် လက်ပံတောင်းတောင် ၊ ဆည်တည်းရွာသို့ ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ဘဲ တုံရွာတွင် ပိတ်မိနေပါသည်။
စစ်ခရိုနီ လူယုတ်မာများလက်ချက်ကြောင့် မ သေသင့်ပဲ ပြည်သူလူထုအတွက် အသက်ကိုရင်း မြေကိုကာကွယ် တောင်းတန်တွေကို အပျက်စီး မခံနိင် လို့ အသက်နဲ့ဘဝကို စ တေးလိုက် တဲ့ လက်ပန်းတောင် သူရဲကောင်း အ မေခင် ဝင်း
အသက်ပျောက်တရား ယ နေ့မနက် ၈း၃၀တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ CR.KO HTET
!! #နှစ်သစ်ကူးရဲ့ #တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လက်ဆောင်
dec.21.204 နှစ်သစ်ကူးရဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လက်ဆောင်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ခရိုင်၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊နနွင်းဂရက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ယာကုန်းကျေးရွာ၌ ၂၁ွ.၁၂.၂၀၁၄ရက်နေ့(ယနေ့)ည ၇း၀၀ နာရီတွင် ပုသိမ်မြို့နှင့် ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်တပ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၊ စီးပွားရေးသမားများ၏ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများတွင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် တာဝန်ခံဖြေရှင်းစေရန် နှင့် အတင်းအဓမ္မမြေသိမ်းဆည်းသူများ ကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
ယနေ့သည် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကရင်တိုင်းရင်း သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု ဝမ်းစာရှာမှီးစားသောက်ခြင်းကို လုယူဖျက်ဆီး မှုများ ရပ်တန့်ရန် သိမ်းဆည်းမြေများပြန်လည်ရရှိရေးဦးဆောင်ကော်မတီမှ မြေသိမ်းခံ ရသူများနှင့် ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့သည်။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြေလည်မှုရရှိသည့်အချိန်ထိ တာဝန်ခံဖြေရှင်းမှု မပြုလုပ်နိုင်ပါက ပြင်းထန်သည့် လှုပ်ရှားမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သစ္စာအဓိဌာန်ပြုခဲ့သည်။
တောင်ယာကုန်းကျေးရွာ၊ နနွင်းဂရက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ cr. NaingzawKyiWin
ဝန်ကြီးချုပ် ရဲ့ကတိ ပျက်ယွင်းခဲ့ပါက ပြင်းထန်သည့်လှုပ် ရှားမှုများပြုလုပ်မည့် သိမ်းဆည်းမြေများပြန်လည် ရရှိရေးဦးဆောင်ကော်မတီ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင် ပုသိမ်မြို့နယ်နှင့် ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အတွင်းမှ သိမ်းဆည်းမြေယာများကိစ္စကို ၁၆.၁၂.၂၀၁၄ရက်နေ့က တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် သိမ်းဆည်းမြေများပြန်လည် ရရှိရေးဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့ ကတိကဝတ်များ အာမခံချက်များ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုများ ထားရှိခဲ့ကြသည်။
ရက်သတ္တပတ် တပတ်အတွင်း ပြေလည်အောင် မ ဖြေရှင်းခဲ့နိုင် ပါက ယခုထက်ပြင်းထန်သည့် လှုပ် ရှားမှုများ အဆက်မပျက်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိမ်းဆည်းမြေများပြန် လည် ရရှိရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင် တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်မိုးစန္ဒာမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၄ရက်နေ့ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာလာသည့်အချိန်တွင် လည်း တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ယင်းကပင် ဆက်လက်၍ပြောကြားခဲ့ သည်။
#BURMA #MYANMAR #Michaungkan #PROTESTCAMP #taken #down by #POLICE
“The rally camp at the gates of City Hall has been taken down – the police detained 14 protestors and took them to Dagon Township police station,”photcr. Win Ko Hlaing